आइतबारको संसद बैठकमा देखिए यस्ता दृश्यहरु ! – Setosurya
आइतबारको संसद बैठकमा देखिए यस्ता दृश्यहरु !
प्रेम कुमार श्रेष्ठ, काठमाडौं ।
प्रतिनिधी तथा प्रदेश सभाको चुनावपछि पहिलो पटक सभामुखको नेतृत्वमा संसद बैठक बसेको छ । आइतबार दुई चरणमा बसेको बैठकमा कृष्ण बहादुर महरा सभामुखको भूमिकामा थिए । महरा वाम गठबन्धनबाट आज नै सभामुख बनेका हुन् । महरा शनिबार मात्रै गठबन्धनको तर्फबाट सभामुखको उम्मेदवार बनेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले लिए विश्वासको मत
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजको संसद बैठकबाट विश्वासको मत लिएका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राखेको प्रस्तावको पक्षमा २ सय ८ र विपक्षमा ६० मत प्राप्त गरे । यो संगै ओलीले संसदबाट बहुमत प्राप्त गरेका छन् । संसदमा २ सय ६८ सांसद उपस्थित रहेका थिए ।
आइतबार बसेको संसदको दोस्रो बैठकमा ओलीले विश्वासको मत लिएका हुन् । दिउँसो ३ बजे बसेको संसदको बैठकमा सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए ।
नयाँ सभामुखको नेतृत्व
प्रतिनिधी तथा प्रदेश सभा चुनावपछि संसद भवनमा आज नयाँ सभामुख कृष्ण बहादुर महराले बैठक चलाएका थिए । पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका महरा हिजो सर्वसम्मत रुपमा सभामुखमा निर्वाचित भएका हुन् ।
वाम गठबन्धका तर्फबाट सभामुख भएका महरालाई राजपा, संघीय समाजवादी पार्टी लगायतका दलले समर्थन गरेका थिए । यसैगरी उनलाई नेपाली कांग्रेसले कुनै उम्मेद्वार नउठाएर मौन समर्थन गरेका थिए ।
कैलालीको घटना सम्बोधन
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका ५ मा बोक्सीको आरोपमा कुटिएकी राधा चौधरीको बारेमा पनि संसदमा बहस भएको छ । २० वर्षीय चौधरीलाई बोक्सीको आरोपमा भोले बाबा (रामबहादुर चौधरी) र विरामी भनिएकी पार्वती चौधरीले ६ घण्टा निर्घाट कुटेका थिए ।
बोक्सीको आरोपमा राधा कुटिदाँ गाउँले भने मुकदर्शक बनेका थिए । नारी दिवसको दिन सयौँ मानिसका अगाडि बोक्सीको आरोपमा कुटिएकी राधा चौधरीका बारेमा संसदमा मूल मुद्धा बनेको छ ।
कैलालीका घटनाका बारेमा संसदमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित एमाले नेता माधव कुमार नेपाल नेकपा माओवादी (केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ नेमकिपाका नेता प्रेम सुवाल लगायतका नेताले बोलेका थिए ।
आजको मूल बैठक प्रधानमन्त्रीको विश्वसको मत भए पनि अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘बोक्सीको आरोपमा कुट्ने तथा मुकदर्शकलाई कारबाहीको एक्सन चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।’
एक मिनेट सम्बोधन
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शेखर कोइरालाले संसदको रोष्टममा गएर एक मिनेट मात्र सम्बोधन गरेका थिए । विसं २०६४ सालदेखि निरन्तर संसद्मा सहभागी जनाउँदै आएका कोइरालाले आज पहिलो पटक रोष्टममा बोलेका थिए ।
पहिलो पटक संसदमा बोलेका कोइरालाले सभामुख महरालाई शुभकामना दिनुको साथै कांग्रेसले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने बारेमा सम्बोधन गरेका थिए ।
गिनिज बुकमा नाम लेखाउने कि ?
नेकपा माओवादी (केन्द्र) का नेता पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ले पछिल्ला १० वर्षमा १० जना प्रधानमन्त्री भएकोमा ८ वटा आफ्नै पहलमा भएको बताए । प्रचण्डले ठ्याउली पारमा भने, ‘अब भविष्यमा कति जना प्रधानमन्त्री बनाएपछि गिनिज बुकमा नाम लेखिन्छ होला ।’ अन्तमा प्रचण्डले आफ्नो पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीलाई मत दिएको जनाए ।
संसद भवनमा प्रधानमन्त्रीले बहुमतको मत माग्दै गर्दा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा बसेको छ । संसदको रोष्टममा बोल्दै गर्दा नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले भने, ‘अब सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमालेको पार्टी अध्यक्ष होइन देशको प्रधानमन्त्री हो । बोल्दा सोचेर बोल्नुहोस् नत्र हामी हिसाबकिताब माग्छौँ ।’
गत प्रतिनिधी सभा चुनावमा कांग्रेसबाट ६३ जनाले संसद् भवनमा सहभागी भएका छन् ।kendrabindu
प्रधानमन्त्री ओलीले ७७.६ प्रतिशत विश्वास मत, कति खस्यो विपक्षमा ?
६ स्थानीय तहको मात्र परिणाम आउन बाँकी, कहाँ कुन दलले जिते?
बर्दियामा दुई गौतमबीच तीब्र प्रतिष्पर्धा, कसको कति भोट ?
प्रधानमन्त्रीसँग को–को जाँदैछन् भारत ? (सूचीसहित)
यस्तो छ पर्वतको पछिल्लो मतगणना अपडेट : वाम गठबन्धनको फराकिलो अग्रता कायमै !
मधेसी मोर्चाद्वारा माधव नेपालको कार्यक्रम विथोल्ने प्रयास, पत्रकारसहित ३ घाइते
निर्वाचन आयोगले भन्यो-७० प्रतिशत मत खस्यो
एमालेका स्वयंसेवकलाई बामदेवको निर्देशन- घुसपैठ र अराजकता रोक्न सचेत होऊ
सुनसरीमा विप्लव माओवादीका पाँचजना नेता र कार्यकर्ता प्रहरीको नियन्त्रणमा
चुवा एमालेमय बन्दै, बामपन्थीले बहुमतको सरकार चलाउँछन, ढुक्क भएर मतदान गर्नुस- तिमिल्सीना
अमेरिकाको टेक्ससमा अन्धाधुन्ध गोली प्रहार, २६ को मृत्यु
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघको अध्यक्षमा एमाले निकट खतिवडा विजयी, क-कसले जिते ?
माओवादी केन्द्रका नेताको नयाँ प्रस्ताव : सरकारको नेतृत्व ओली होइन प्रचण्डले गर्नुपर्छ !
प्रधानमन्त्री देउवा र समकक्षी मोदीबीचको औपचारिक भेटवार्ता सकियो अाठ बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर हुँदै,
चुनाबमा मिडियाको भूमिका जनआन्दोलनकै जस्तो : प्रधानमन्त्री
एमाले बिरुद्ध ४ दलको यस्तोसम्म षड्यन्त्र ?